MUUQAAL:-Ciidamada Amniga Oo Maanta Waddada Maka-Al-Mukarama ku Qarxiyay Gaari Miineysan Oo Loo Adeegsan Lahaa Qarax | Saadaal Media
MUUQAAL:-Ciidamada Amniga Oo Maanta Waddada Maka-Al-Mukarama ku Qarxiyay Gaari Miineysan Oo Loo Adeegsan Lahaa Qarax
Aug 11, 2017 - jawaab
Ciidamada Amniga ee Dawladda Fedaraalka ah ayaa maanta fashaliyay Qarax ismiidaamin ah oo lagu waday in laga rido wadada Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho.
Waxaa ugu dambayntii ay ciidamada Aminiga Qarxiyeen Gaarigii miinaynaa ee loo adeegsan rabey Qaraxa, kaasoo sababay dhaawaca hal qof.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Max’ed Axmed Carab ayaa sheegay in hay’adaha ammaanka ay xogta gaarigasi hayeen islamarkaana ay ku guuleysteen in la fashiliyo.
“Gaari miineysan ayaa looga tagay nawaaxiga Carwada Al Kowthar ee ku taalla waddada Maka Al Mukaran. Intaasi kadib ciidanka dowladda ayaa goobta soo gaaray waxaana ay sameeyeen howlgallo, waxaana ay xireen waddadda iyagoona markii dambe gaariga Qarxiyay”, sidaasi qof goob jooga ah ayaa u sheegay Hiiraan Online.
Saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sidoo kale sheegay marka uu dhamaado howlgalka in ay faafaahin ka bixin doonaan Qaraxa iyo waxa uu ahaa.
Xaaladda ayaa hadda degan waxaana goobta qaraxa uu ka dhacay lagu arkayaa ciidamo badan oo ah kuwa nabad-gelyada suga.
Illaa iyo hadda lama oga cida laheyd gaariga miineysnaa ee la dhigay waddada dhinaceeda.
Al Shabaab ayaa inta badan Qaraxyo ismiidaamin ah iyo weeraro gaadma ka geysta magaalladda Muqdisho, kuwaas oo inta badan ay ka dhashaan khasaare xooggan.
4-ta bishii August, ugu yaraan saddex qof oo shacab ah ayaa ku dhintay Qarax gaari oo ka dhacay waddada mashquulka badan ee Maka-Al-Mukaram ee magaallada Muqdisho.
Afhayeenka wasaaradda amniga ayaa sheegay in Qaraxaasi uu ka dhashay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha Qarax, sida uu hadalka u dhigay balse ma uusan sheegin khasaaraha ay ogyihiin ee ka dhashay Qaraxa.
Dhinaca kale 30-ka bishii July Afhayeenka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Axmed Carab, ayaa Hiiraan Online u sheegay in shan qof ay ku dhinteen halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen Qarax ka dhacay inta u dhaxeysa Saldhiga Police-ka degmadda Waaberi iyo Hotel-ka Maka Al-Mukarama ee Magaalladda Muqdishu.